ICancer Equation Balancer
Ugcino lwedatha ye-10000 yeekhemikhali ukusabela - izixhobo zekhemistry-ulwazi lwezinto
Ufuna ukukhangela ii-equations ngaphandle kweintanethi, zama iapp yethu yeselfowuni
Khangela kwi-Android yakho okanye kwi-App Store ye-Iphone ye-Chemical Equation Balancer app kunye nale logo
Iinkcazo ezisisiseko kwiKhemistry
Yintoni ulinganiso lweekhemikhali?
I-Chemical Equation luhlobo lokuchaza indlela ekhemikhali eliza kuphendula ngayo igama lento nganye yemichiza eya kutshintshwa luphawu lweekhemikhali.
Kwi-Chemical Equation, ulwalathiso lwentolo lumele icala apho impendulo ivela khona. Ukuphendula ngendlela enye, siya kubonisa ngotolo ukusuka ekhohlo ukuya ekunene. Ke izinto ezisekhohlo ziya kubandakanyeka, kwaye enye esekunene iya kuba yimveliso.
Inkcazo yokuLingana ngokuLinganayo
I-equation equation yi-chemical reaction equation apho intlawulo iyonke kunye nenani lee-athomu kwinto nganye ekuphenduleni ziyafana kuzo zombini ii-reactants kunye namacandelo. Ngamanye amagama, ubunzima kunye nentlawulo kumacala omabini okuphendula bayalingana.
Imizekelo yokulinganisa okungalinganiyo kunye nokulinganisela
Izinto ezenzekileyo kunye neemveliso zempendulo yeekhemikhali zidweliswe kulungelelwaniso lweekhemikhali olungalinganiyo, kodwa ubuninzi obufunekayo ukuzalisekisa ubunzima abuchazwanga. Lo mlinganiso, umzekelo, awulinganiswanga ngokobunzima bokuphendula phakathi kwe-iron oxide kunye nekhabhoni ukwenza i-iron kunye ne-carbon dioxide:
Kuba akukho ion kumacala omabini e-equation, intlawulo ilinganisiwe (intlawulo engathathi hlangothi).
Kwicandelo lama-reactants equation (ekhohlo kwetolo), zimbini ii-atom zentsimbi, kodwa inye kuphela kwicala lemveliso (ngasekunene kwetolo). Ungatsho ukuba i-equation ayilingani nangona ungazibali ezinye ii-athomu.
Kuwo omabini amacala asekhohlo nasekunene kutolo, injongo yokulinganisa i-equation kukufumana inani elifanayo kuhlobo ngalunye lweathom. Oku kufezekiswa ngokutshintsha ii-coefficients zekhompawundi (amanani abekwe phambi kweefomula zekhompawundi). Imibhalo engezantsi (amanani amancinci ngasekunene kweeathom ezithile, ezinje ngentsimbi kunye neoksijini kule meko) azange zitshintshwe.
Ukulingana okulinganayo yile:
Yintoni into ekhemistry?
Qaphela, konke okubonakalayo, kubandakanya imizimba yethu, zizinto. Kukho izinto zendalo ezifana nezilwanyana, izityalo, imilambo, umhlaba ... zizinto ezingezizo.
Izinto zendalo zinenani lezinto ezahlukeneyo. Kwaye izinto ezingezizo ezenziweyo zenziwe ngezinto. Yonke into yinto okanye ngumxube wezinto ezithile. Umzekelo: iAluminiyam, iiplastiki, iglasi, ...
Ziziphi iipropati zabo?
Into nganye ineempawu ezithile: ilizwe okanye ifom (eqinileyo, engamanzi, irhasi) umbala, ivumba kunye nencasa. Ukubala okanye ukunganyibiliki emanzini ... Indawo yokunyibilika, indawo yokubilisa, umxhuzulane othile, ukuqhuba kombane, njl.
Kwaye amandla okuguqula ukuba ube kwezinye izinto, umzekelo, ukukwazi ukubola, ukubaleka ... ziipropathi zeekhemikhali.
Zonke izinto zenziwe ngamasuntswana amancinci kakhulu, ombane angathathi hlangothi abizwa ngokuba zii-atom. Kukho amashumi ezigidi zezinto ezahlukeneyo, kodwa zingaphezulu kwe-100 kuphela zee-athomu.
Iatom inenucleus ehlawuliswe ngokufanelekileyo kunye neqokobhe elenziwe ngombane omnye okanye nangaphezulu
Eyona nxaki idumileyo
Kwakhona kwaziwa ngokuba yi-synthesis reaction. Olunye uhlobo lwenzeka rhoqo ngokudityaniswa kokuphendula kukusabela kwento eneoksijini yokwenza i-oxide. Ngaphantsi kweemeko ezithile, isinyithi kunye ne-nonmetal zombini zisabela ngokulula ngeoksijini. Nje ukuba ilayishwe, i-magnesium iphendula ngokukhawuleza nangokumangalisayo, isabela ngeoksijini evela emoyeni ukwenza i-magnesium oxide powder.
C2H2 + CO + H2O => C2H3YEKHAYA 3Mg + 2P => Mg3P2 Fe + 2Fe (HAYI3)3 => 3Fe (HAYI3)2 C + O2 => CO2 Na2O + SO2 => Na2SO3 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 => 3Ca (H2PO4)2 C2H2 + 2CH3CHO => H O (CH3ICHCHCHCH (CH3OH Jonga konke ukuphendula ngokudibeneyo
Uninzi lwempendulo yokubola lubandakanya ubushushu, ukukhanya, okanye umbane kwigalelo lamandla. Iikhompawundi kanambambili yimixube equka izinto ezimbini kuphela. Olona hlobo lulula lokuphendula kukubola kuxa ikhompawundi yokubumba ihla iye kwizinto zayo. I-oxide yeMercury (II), ebomvu ebomvu, iyabola yenze i-mercury kunye negesi yeoksijini xa ishushu. Kwakhona, impendulo ithathwa njengempendulo yokubola kwanokuba enye okanye ezingaphezulu zeemveliso zisisihlanganisi. Icarbonate yentsimbi iyaqhekeka ukuze yenze i-oxide yentsimbi kunye necarbon dioxide gas. I-calcium carbonate umzekelo ibola iye kwi-calcium oxide kunye ne-carbon dioxide.
Cu (OH)2 => CuO + H2O 2HI => H2 + I2 Ag2S => 2Ag + S BaCl2 => Cl2 + Ba 2CuO => 2Cu + O2 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 C2H5Cl => C2H4 + I-HCl Jonga konke ukuphendula kokubola
Impendulo yokunciphisa i-oxidation (redox) luhlobo lokuphendula kwamachiza kubandakanya ukudluliswa kwee-elektroni phakathi kweentlobo ezimbini. Impendulo yokunciphisa i-oxidation nayiphi na impendulo yamakhemikhali apho inani le-oxidation ye-molecule, i-athomu, okanye iinguqu zenguqu ngokufumana okanye ukulahla i-electron. Ukuphendula kwe-Redox kuqhelekile kwaye kubalulekile kweminye yemisebenzi esisiseko yobomi, kubandakanya ifotosinthesisi, ukuphefumla, ukutsha kunye nokubola okanye ukurusa.
C + 2NoNO3 => 2NaNO2 + CO2 2Al + 3H2SO4 => UAl2(NGOKU4)3 + 3H2 C2H2 + Cl2 => C + 2HCl 2C + 2 Hayi2 => N.2 + 2CO2 Br2 + 2NaI => Mna2 + 2NaBr 2FeCl2 + H2O2 + 2HCl => H2O + 2FeCl3 2K + S => K2S Jonga lonke ugcino-lonciphiso lokuphendula
I-A + BC → AC + B Element A sisinyithi kule mpendulo ngokubanzi kwaye ithathe indawo yento B, isinyithi esikwikhompawundi ngokunjalo. Ukuba into yotshintsho ayisiyentsimbi, kufuneka ibuyisele enye into engeyiyo intsimbi kwikhompawundi, kwaye iba lulinganiso ngokubanzi. Uninzi lwezinyithi lusabela ngokulula ngeeasidi, kwaye enye yeemveliso zokuphendula xa zisenza igesi yehydrogen. I-Zinc iphendula kwi-zinc chloride ene-aqueous kunye ne-hydrogen ene-hydrochloride acid (jonga umfanekiso ongezantsi).
CH3CH2CH2OH + C2H5COOH => H2O + C2H5Cooch ukuhambelana namazwi2CH2CH3 Fe + H2SO4 => H2 + Ewe4 H2SO4 + Mg => H2 + MgSO4 4Cl2 + 2Ee2O3 => 4FeCl2 + 3O2 CH4 + Cl2 => CH3Cl + I-HCl Mg + ZnCl2 => Zn + MgCl2 2HCl + Zn => H2 + ZnCl2 Jonga Zonke izinto ezinokususwa endaweni enye
I-AB + CD → AD + i-CB A kunye no-C zii-cations ezichanekileyo kule mpendulo, ngelixa u-B no-D bezichasene ne-anion. Ukuphendula okuphindwe kabini kwenzeka kwisisombululo esinamandla phakathi kweekhompawundi. Ukwenza impendulo, enye yeemveliso zihlala ziqinile, irhasi, okanye ikhompawundi njengamanzi. Iifom zokuthintela ukusabela endaweni yokubuyisela endaweni ephindwe kabini xa iications ezivela kwinto enye edityanisiweyo zidibanisa ukwenza ikhompiyutha ye-ionic engenakunyibilika kunye nee-anion ezivela kwenye into ephendulayo. Ukuphendula okulandelayo kwenzeka xa izisombululo zamanzi ze-potassium iodide kunye ne-lead (II) nitrate zidityanisiwe.
3NoOH + FeCl3 => 3NaCl + Fe (OH)3 Al2O3 + Ca (OH)2 => H2O + Ca (AlO2)2 H2O + I-HCl + KCrO2 => KCl + Ikhonkco (OH)3 I-NaOH + CH3YONKE4 => CH3COONA + H2O + NH3 2KOH + Mn2O7 => H2O + I-2KMnO4 BaCl2 + UMGCO3 => (NH4)2CO3 + 2HCl => H2O + 2NH4Cl + CO2 Jonga lonke uluvo oluphindwe kabini
Jonga iWebhusayithi yethu ye-Chemical Equation Dictionaru ngolwimi olwahlukileyo
IsiArabic (قاموس المعادلات الكيميائية) IsiBulgaria (речник на химичните уравнения) IsiTshayina (Esenziwe lula) (化学 方程式 字典) IsiTshayina (Esiqhelekileyo) (化學 方程式 字典) IsiCroatia (rječnik kemijskih jednadžbi) IsiCzech (islovník chemických rovnic) IsiDanish (kemisk ligningsordbog) IsiDatshi (woordenboek voor chemische vergelijkingen) IsiFinnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) IsiFrentshi (i-dictionnaire d'équations chimiques) IsiJamani (Wörterbuch für chemische Gleichungen) IsiGrike (λεξικό χημικής εξίσωσης) IsiHindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) IsiTaliyane (dizionario delle equazioni chimiche) IsiJapanese (化学 反 応 式 辞書) IsiKorean (화학 방정식 사전) IsiNorway (kjemisk ligningsordbok) IsiPolish (Słownik równań chemicznych) IsiPhuthukezi (dicionário de equação química) IsiRomania (dicționar de ecuații chimice)
IsiRashiya (словарь химических уравнений) IsiSpanish (diccionario de ecuaciones químicas) IsiSwedish (kemisk ekvationsordbok) IsiCatalan (diccionari d'equacions químiques) IsiPhilippines (kemikal na equation ng kemikal) IsiHebhere (מילון משוואה כימית) Isi-Indonesia (kamus persamaan kimia) IsiLatvia (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) IsiLithuania (cheminių lygčių žodynas) IsiSerbia (речник хемијских једначина) IsiSlovak (slovník chemických rovníc) IsiSlovenia (slovar kemijske enačbe) IsiUkraine (словник хімічних рівнянь) IsiAlbania (fjalor i ekuacionit kimik) IsiEstonia (keemiliste võrrandite sõnastik) IsiGalician (dicionario de ecuacións químicas) IsiHungary (kémiai egyenlet szótár) IMaltese (dizzjunarju tal-eyazazzion kimika) IsiThai (พจนานุกรม สมการเคมี) IsiTurkish (kimyasal denklem sözlüğü)
IsiPersian (فرهنگ معادلات شیمیایی) IsiBhulu (chemiese vergelyking woordeboek) IsiMalay (kamus persamaan kimia) IsiSwahili (kamusi ya equation yahlukileyo) I-Irish (i-foclóir cothromóid cheimiceach) IsiWelsh (geiriadur hafaliad cemegol) I-Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Isi-Icelandic (efnajöfnuorðabók) IsiMacedonia (речник за хемиска равенка) IsiYiddish (כעמיש יקווייזשאאן ווערטערבבך) IsiArmenian (IsiNgesi հիմիական հավասարության բառարան) IsiAzerbaijani (i-kimyəvi tənlik lüğəti) Isi-Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) IsiGeorgia (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) IsiCreole saseHaiti (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (iZiko loNgqamaniso oluVulekileyo) IsiBengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Isi-Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) UCebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Isi-Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) IsiGujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) IsiHausa (kamus din lissafi na sinadarai) IsiHmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (isichazi-magama semichiza IJavanese (kamus persamaan kimia) IsiKannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) IsiKhmer (វចនានុក្រម សមីការ គីមី) IsiLao (ວັດ ຈະ ນາ ນຸ ກົມ ສົມ ຜົນ ທາງ ເຄ ມີ) IsiLatin (isichazi-magama se-equation eget) IsiMaori (papakupu whārite matū) Imarathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) IMongolia (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दक्श IsiPunjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) AmaSomaliya (qaamuuska isle'eg kiimikada) IsiTamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) IsiTelugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba ngoko) IsiZulu (isichazamazwi se-chemical equation) IMyanmar (Burmese) (ဓာတု ညီမျှခြင်း အဘိဓါန်) IsiChichewa (isakhiwo equation dikishonale) IsiKazakh (химиялық теңдеу сөздігі) IsiMalagasy (rakibolana fitoviana simika) IsiMalayalam (rakibolana fitoviana simika) IsiSinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) IsiSuthu (iikhhemik'hale ea equation ye lik'hemik'hale) ISudan (kamus persamaan kimia) IsiTajik (луғати муодилаи химиявӣ) IsiUzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) IsiAmharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) IsiCorsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) IsiHawaii (ipuke wehewehe ʻōlelo kūmole) IsiKurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kyemyewî) IKhyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) IsiLuxembourg (chemesche Gleichwörterbuch) IsiPashto (د کيمياوي معادلې قاموس) ISamoa (vailaʻau faʻasino igoa) IScottish Gaelic (i-faclair co-aontar ceimigeach) IsiShona (kemikari equation duramazwi) IsiSindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) IsiFrisian (gemysk fergeliking wurdboek) IsiXhosa (imichiza equation dictionary)